mairie-antananarivo – FANENTANANA : Fanadiovana Ambodivona
FANENTANANA : Fanadiovana Ambodivona
auteur 2 martsa 2017 Commentaires fermés
Tao aorian’ny fampivoriana ny mpivarotra tsy manara-dalàna eny Ambodivona omaly Talata faha 18 Febroary 2017 dia nidina teny an-toerana ireo tompon’andraikitra avy eto amin’ny Kaominina teny an-toerana nanao ny fandaminana.
Ny tanjona voalohany ny hanalalahana ny lalana eny Ambodivona ho fisorohana ny fitohanan’ny fifamoivoizana, manaraka izany mba hiarovana ny fandriam-pahalemana eny an-toerana ary farany hampidirana ireo mpivarotra amin’ny sehatry ny ara-dalàna.
Fampitandremana farany ity natao ity mialohan’ny handraisin’ny Kaominina sy ny mpitandro filaminana fe-petra entitra. Voateny tao daholo ireo mpivarotra hani-masaka, mpivarotra enta-madinika, mpivarotra voankazo ireo taxi-phone sy ireo sarety mipetraka anaty lalana.
Fa ankoatra ireo rehetra ireo, omaly ihany koa no natomboka ny « allignement » mikasika ny lalana ho amboarina manakaiky ny « station total ». Maharitra 60 andro ny fanamboarana ary mirefy 150m ny lala-tany hatao « pavet » izay fikambanan’ny olo-tsotra eny an-toerana no mikarakara azy.